Ramla Ali oo sameysay soo muuqasho taariikhi ah | KEYDMEDIA ONLINE
Ramla Ali oo sameysay soo muuqasho taariikhi ah
Ramla Ali oo Soomaaliya ku mataleysay cayaaraha Olombikada ee ka socda Tokyo, ayaa ka soo hartay tartanka kadib markii ay soo muuqasho taariikhi ah ka sameysay Japan.
TOKYO, Japan - Ramla Ali ayaa guuldarro kala kulantay Claudia Nechita oo u dhalatay Romania, kadib markii 31 jirtaan ay noqotay feeryahankii ugu horeeyay ee abid Soomaaliya ku matala Ciyaaraha Olambikada.
Ramla, waxa ay sameysay soo muuqasho taariikhi ah, hayeehsee, uma suura galin in ay u gudubto wareegga xiga ee tartanka, kadib markii ay wajahday laba aliflaha ka tirsan Ciidanka Romania ee Claudia Nechita.
Matalaha Soomaaliya, waxa ay ka hartay guud ahaan tartanka feerka miisaanka fudud ee ciyaaraha Olimbikada, taas oo sababtay in ay dhadhamiso guuldaradii ugu horreysay muddo sanad ah.
Ujeedka Ramla, wuxuu ahaa in ay Tokyo, kala soo laabato bilad dahab ah oo ku duuduuban calanka Soomaaliya, hayeeshee, dadaalkeedii ma suuragalin.
Ramla Saciid Axmed Cali, waxay dhalatay 16-kii Sebtember 1989, waa xirfadyahan Soomaaliyeed oo feeryahan ah, muunadle ah, qoraa ah isla markaana u ololeeysa sinnaanta.
Waxay gacan ka geysatay aasaaskii xiriirka Feerka Soomaaliya ee Muqdisho ka dhisan waxayna noqotay feeryahankii ugu horreeyay taariikhda ee matala Soomaaliya tartankii adduunka ee Haweenka, kaasoo lagu qabtay magaalada New Delhi ee dalka Hindiya.
Guud ahaan Sportska Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaya dhibaato musuqmaasuq, waxaana inta badan aan xaafiisyada sare soo dhaafin dhaqaalaha loogu talagalay xiriirada ay feerka, Tikwaandhuuga, dabaasha, bootinta iyo tuuryadu, ka mid yihiin.
Dhawaan ayay ahayd markii Keydmedia Online baahisay musuq baahsan oo ka dhex jira Sports-ka dalka, taas oo sababtay in saacado kadib soo bandhigiddaas ay hadallo kulkul oo xatooyo xoolo dad weyne la xariira isku eedeeyaan wasiiradii kala danbeyay ee Wasaaradda Cayaaraha.